मुना कार्की ह,त्या,का,ण्ड,मा प्रहरीले उत्तर नभेटेका चार प्रश्न – " सुलभ खबर "
मुना कार्की ह,त्या,का,ण्ड,मा प्रहरीले उत्तर नभेटेका चार प्रश्न
सानेपा ह,त्या,का,ण्ड,को अनुसन्धानमा प्रहरी जुटेको ५ साता भयो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) टेकप्रसाद राईसहितको प्रहरी अधिकृतहरू सुरूदेखि नै घ,ट,ना,को अनुसन्धानमा संलग्न छन्।अ,प,रा,ध अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका मध्येका एकजना प्रहरी अधिकृत हुन् एसएसपी राई। तर, घ,ट,ना,को चुरो राई नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले फेला पारेको छैन। टोलीले घ,टना हुनुको कारण के हो पत्ता लगाउन
सकेको छैन। उनले उक्त घ,टनालाई ‘सु,सा,इ,ड नोट नलेखी गरेको सु,सा,इड जस्तो भयो’ भनेका छन्।आपराधिक घ,टनामा कारणको खोजी त हुन्छ। कारणबिना घ,ट,ना हुँदैन पनि। यसले गर्दा कारणको खोजी गर्नुपर्छ। यससँगै घटनासँग सम्बन्धित केही प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। तिनै अनुत्तरित प्रश्नले गर्दा घ,टनालाई शं,का,को दृष्टिले हेर्दा अनर्थ नहुने देखिन्छ।
१) २७ माघको बिहान पूर्वसचिव अर्जुन कार्की निवासको भान्साकोठामा घरेलु कामदार विजय चौधरीले नै कार्की पत्नी मुनाको ह,,त्या गरेको भन्ने सिसिटिभीको फुटेजले प्रमाणित गरेको छ। भान्साकोठा प्रवेश गर्ने ढोकामा उभिएर मौका हेरेका उनले तेस्रो पटकमा मुनामाथि आ,क्र,मण गरेर अन्ततः ह,,त्या गरे। जहाँ विजयले पछाडिपट्टीबाट केही वस्तुले अठ्याएको-अठ्याएकै गरेर लडाएपछि केही क्षणमा पिर्काले ६/७ पटक हानेको देखिन्छ। त्यसपछि कतिखेर निस्के भान्साकोठाबाट विजय? भान्साकोठादेखि निस्केपछि कता गए? उनी कस्तो अवस्थामा निस्के? उक्त प्रश्नको
उत्तर सिसिटिभी फुटेजबाट पाइँदैन।विजय नाइलनको डोरी लिएर झु,ण्डि,न गएको, झु,ण्डि,ए,को र झु,ण्डि,दा ल,डे,को दृष्य कैद भएको फुटेजलाई किन प्रहरीले लिएन र अनुसन्धान गरेन? यतातर्फ पनि प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।आँगनदेखि प्यासेज हुँदै भान्साकोठामा प्रवेश गरेर घ,टना घ,टा,एको देखाएको सिसिटिभी फुटेजले विजय भान्साकोठादेखि निस्केको र प्यासेजसम्म गएको किन देखाएन भन्ने कुरामा प्रहरीको प्रश्न केन्द्रित भएको छ कि छैन भन्ने चासो स्वाभाविक हुनसक्छ।
२) प्रहरीका अनुसार कार्की निवासमा जम्मा ४ वटा सिसिटिभी क्यामेरा जडित छन्। ती क्यामेराहरू घरको कम्पाउण्ड क्षेत्रमा भएकोले घरको भर्‍याङ क्षेत्रको दृष्य पनि कै,द गर्न सक्छ। भर्‍याङ छेउमा भुइँमा कार्कीका घरेलु कामदार विजय चौधरी ल,डे,को अवस्थामा मृ,,त फेला परेका थिए। उनको घाँ,टीमा ना,इ,लनको डो,,री थियो भने उनी झु,ण्डि,ए,को भनिएको डो,री चुँ,डि,ए,को अवस्थामा तु,न्द्रु,ङ्ग थियो। तर, विजय नाइलनको डो,री लिएर झु,ण्डि,न गएको, झु,ण्डिए,को र झु,ण्डि,दा ल,डे,को दृष्य कैद भएको फुटेजलाई किन प्रहरीले लिएन? र अनुसन्धान गरेन यतातर्फ पनि प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
घरेलु कामदार विजयले नै मुनाको ह,,त्या त गरे। त्यसपछि उनले आ,त्म,ह,,त्या गरेको प्रहरीले भन्यो। तर, प्रहरी अनुसन्धानले हालसम्म विजयले मुनाको हत्या योजना बनाएर गरेका हुन् कि तत्काल आवेशमा आएर गरेका हुन्? भन्ने कुराको जवाफ दिनसकेको देखिदैँन। ३) ह,त्या,का,ण्ड,को अनुसन्धानमा ‘ट्र,या,कर ड,ग’ (तालिमप्राप्त कुकुर)को प्रयोग गरिन्छ। जसले कसूरदारको पहिचान गरेर आ,प,रा,धिक घ,ट,नाको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यो घ,ट,नाको अनुसन्धानका क्रममा कुकुरको प्रयोग गरिएको छैन। मुनाको ह,,त्या विजयले गरेको कुरामा दुईमत रहेन। विजयले आ,त्म,ह,,त्या गरेको प्रहरीले विश्वास गर्दै आएको छ। तर, यदि घ,ट,ना त्यसो नभई विजयलाई पनि कसैले ह,,त्या गरेर झु,ण्ड्या,ए,को भए उक्त कुरा कुकुरले पत्ता लगाउनेमा प्रहरी कसरी वि,श्व,स्त हुनसकेन?
४) घरेलु कामदार विजयले नै मुनाको ह,,त्या त गरे। त्यसपछि उनले आ,,त्मह,,त्या गरेको प्रहरीले भन्यो। तर, प्रहरी अनुसन्धानले हालसम्म विजयले मुनाको ह,,,त्या योजना बनाएर गरेका हुन् कि तत्काल आवेशमा आएर गरेका हुन्? भन्ने कुराको जवाफ दिनसकेको देखिदैँन। यदि, उसले यो,ज,नाब,द्ध ढंगले मुनाको ह,,त्या गरेको हो भने त्यो परिस्थितिको पूर्वानुमान मुनाका परिवारका अन्य सदस्यले किन गर्न सकेनन्? उनले तत्काल आवेशमा आएर हत्या गरेर आफूले पनि आ,त्म,ह,,त्या गरेको हो भने, उनले झु,ण्डि,,न प्रयोग गरेको २०० मिटर नाइलनको डोरी कहाँबाट आयो उनी आफैले खरीद गरेको हो भने, कुन पसलबाट ल्याए? ति पसले को हुन्त्य स विषयमा प्रहरी अनुसन्धान चुकेको त छैन?
यद्यपि, प्रहरी अनुसन्धान भने घ,ट,ना,को कारण खोजीमा मात्रै केन्द्रित छ। यसका लागि प्रहरीले घ,ट,नास्थ,लको वस्तुगत दृष्य, श,,व परीक्षण प्रतिवेदन, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदन र फोनको विस्तृत कुराकानीलाई मसिनो गरी अध्ययन गरिरहेको एसएसपी राईले बताएका छन्।मुनाका पति अर्जुन कार्की, बिहानी समयमा काम गर्न आउने महिला र एकजना ‘प्लम्बर’सँग लिएको बयानलाई पनि कारण खोजीको कोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आएको छ। तर, सानेपा ह,त्या,का,ण्ड,का चार प्रश्नको निवारण गर्न प्रहरीले त्यतातर्फ पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ। जसबाट प्रहरीलाई घ,ट,ना,को कारण खोजीमा बल पुग्ने वा घ,टना,को चु,रो,सम्म पुग्न मद्दत गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।